သံဓာတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ | Bezzia
သံဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေက ကလေးရဲ့ အစားအသောက်ပါ။
တောရက်စ် | 10/05/2022 23:55 | ကလေးသူငယ်များ
သံဓာတ်ကဲ့သို့ အရေးကြီးသော အာဟာရဓာတ်များသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် အထွေထွေ ကျန်းမာရေးအတွက် အခြေခံကျသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည့်အတွက် ကလေး၏ အစားအသောက်တွင် ချို့တဲ့နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဘဝရဲ့ ပထမလအတွင်းမှာ၊ ကလေးငယ်သည် နို့မှတဆင့် လိုအပ်သော သံဓာတ်နှင့် အခြားအာဟာရများကို ရရှိသည်။ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နှင့် နို့တိုက်နေချိန်တွင် မိခင်သည် အလွန်ကွဲပြားပြီး မျှတသော အစားအသောက်ကို လိုက်နာရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဒါပေမယ့် ဖြည့်စွက်စာကျွေးပြီးတာနဲ့ ကလေးက အစိုင်အခဲအစားအစာတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အဆင့်ကို ရောက်တဲ့အခါ အစားအသောက်က ကလေးလိုအပ်တဲ့ အာဟာရလိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ သေချာအောင်လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ထဲတွင်, သံဓာတ်ပါဝင်မှုဟာ သွေးအားနည်းရောဂါကို ရှောင်ရှားဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။အသက်၏ပထမလများတွင် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် ပြင်းထန်သောချို့ယွင်းချက်ဖြစ်စေနိုင်သော ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
1 သံဓာတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများကို ဖြည့်စွက်ကျွေးမွေးရန်
1.1 Heme သံဓာတ်ကြွယ်ဝသောအစားအစာများ
1.2 heme မဟုတ်သောသံ
1.3 မှန်ကန်သော သံဓာတ်ပမာဏကို ထိန်းသိမ်းရန် မျှတသော အစားအစာ
သံဓာတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများကို ဖြည့်စွက်ကျွေးမွေးရန်
ကလေးရဲ့ အစားအသောက်အတွက် သံဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အကြံပြုချက်အရှိဆုံး အစားအစာတွေကို မကြည့်ခင် ပထမတစ်နှစ်မှာ အဓိက အစားအစာဆိုတာ မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။ နို့တိုက်. ထို့ကြောင့် အစားအသောက် အချိုးအစား၊ သင့်ကလေး စားသော အစားအစာ ပမာဏ သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းကို အနည်းနှင့်အများ နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ စွဲလန်းမှု မဖြစ်စေသင့်ပါ။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြေလည်သွားမှာမို့လို့ပါ။ အစိုင်အခဲအစားအစာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည် တဖြည်းဖြည်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ပထမနှစ်တွင် အာဟာရထောက်ပံ့မှုကို နွားနို့ဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း သင့်ကလေးသည် အစားအစာ အမျိုးမျိုးကို စားသုံးရန် မြန်ဆန်လာသည်နှင့်အမျှ သင့်ကလေးအား အမျိုးမျိုးသော မျှတသော အစားအစာကို ပေးဆောင်ရန် လွယ်ကူလေဖြစ်သည်။ ကလေးများစွာအတွက် အစားအစာသည် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် မည်သည့်အစားအစာကိုမျှ မကန့်ကွက်ခြင်းမှာ လုံးဝအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကလေးဘဝက အစားအစာအားလုံးကို လက်ခံရင် အာမခံချက် အောင်မြင်မှာလား။ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီဘဝမှာ ဘာမှ မသေချာပေမယ့် ဟုတ်တယ်။ သင့်ကလေးသည် အစားအစာအနည်းငယ်ကို ငြင်းပယ်နိုင်ခြေ ပိုများပါသည်။.
6 လဝန်းကျင်တွင်စတင်သောဤအစားအစာတွင်၊ အစားအစာများကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမိတ်ဆက်သည်။ ပထမဆုံး အစာကြေလွယ်သော သစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ကောက်နှံများနှင့် အခြားအစားအစာများ တဖြည်းဖြည်း ပေါ်လာပါမည်။. သံသည် အချိုးအစားမတူညီသော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးတွင် ပါ၀င်သည်။ ကလေးရဲ့ အစားအစာထဲမှာ သံဓာတ် ထောက်ပံ့မှု တိုးလာစေပြီး သွေးအားနည်းခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချဖို့အတွက် ဒီသံဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို ကျွေးသင့်ပါတယ်။
သံဓာတ်သည် တူညီသောအတိုင်းအတာမဟုတ်သော်လည်း အစားအစာများစွာတွင် ပါဝင်သောသတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ခန္ဓာကိုယ်က ထိုနည်းအတိုင်းပင် စုပ်ယူခြင်းမရှိပေ။ သံဓာတ်ကို ခွဲခြားသိဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးရဲ့ အာဟာရမျှတပြီး ဒီအာဟာရကို လုံလောက်အောင် စားသုံးပါ။ တစ်ဖက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် သံဓာတ်ချို့တဲ့သော သွေးအားနည်းရောဂါကို ကာကွယ်ပေးသည့် Heme Iron ရှိသည်။
သံဓာတ်အမျိုးအစားကို တိရိစ္ဆာန်အစားအစာများတွင် တွေ့ရှိရသည်။အထူးသဖြင့် အနီရောင်အသားများနှင့် ကိုယ်တွင်းကလီစာများ။ Heme သံဓာတ် အမြင့်ဆုံး အစားအစာများမှာ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ သွေး၊ နှလုံး သို့မဟုတ် အချိုမှုန့်များ ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ၎င်းတို့သည် ကလေးအတွက် သင့်လျော်သော အစားအစာများ မဟုတ်ပေ။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ အနီရောင်အသားကဲ့သို့သော အခြားအစားအစာများဖြင့် စတင်စားသုံးရန်နှင့် heme မဟုတ်သော သံဓာတ်ဖြင့် ဖြည့်စွက်စားသုံးခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။
ဤကိစ္စတွင်သတ္တုရိုင်း အပင်အခြေခံအစားအစာများမှလာသည်။ထို့ကြောင့် သံဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ကောင်းစွာ ကျေညက်စေရန်အတွက် ဗီတာမင်စီ ကြွယ်ဝသော အစားအစာများကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သံဓာတ်ကြွယ်ဝသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များထဲတွင် ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ ဘရိုကိုလီ၊ chard နှင့် အခြားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်မူရင်း အစားအစာများဖြစ်သော ပဲအမျိုးမျိုး သို့မဟုတ် စီရီရယ်။
မှန်ကန်သော သံဓာတ်ပမာဏကို ထိန်းသိမ်းရန် မျှတသော အစားအစာ
ကလေးငယ်လေးဟာ အကောင်းဆုံးကြီးထွားဖွံဖြိုးလာဖို့အတွက် အစားအသောက်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဟန်ချက်ညီညီရှိဖို့ လိုအပ်တာမို့၊ ဒါကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ အားလုံးကို ရရှိစေမှာပါ။. သံဓာတ်ဟာ ကယ်လ်စီယမ်၊ ဗီတာမင် ဒါမှမဟုတ် ပရိုတင်းဓာတ်တွေလို တခြားအာဟာရဓာတ်တွေလို မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ အစိုင်အခဲအစားအစာများကို စတင်မိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့် ၎င်း၏အစားအစာသည် လုံးဝကွဲပြား၊ မျှတပြီး ကျန်းမာနေစေရန် ကလေးအား အစားအစာအမျိုးအစားအားလုံးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် ကူညီပေးခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ဒ » ကလေးသူငယ်များ » သံဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေက ကလေးရဲ့ အစားအသောက်ပါ။
ပင်ပန်းနေတဲ့ မျက်နှာကို ဘယ်လို နှုတ်ဆက်ရမလဲ
စိတ်မချမ်းသာတဲ့ စုံတွဲတွေမှာ ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ရှိသလဲ။